Uyilo lweT-shirt: ezona ziyilo zeempahla ezinkulu zempahla | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 10/04/2022 10:17 | ngokubanzi, Ukuphefumlelwa
Ihlabathi lefashini liyanda ukumela, ngakumbi phakathi kwabaqulunqi kunye nabaqulunqi. Umbuzo osoloko ezibuza wona wonke umntu ngowokuba, ukuba umzobi ngokwenene uthatha indima ebalulekileyo kuyilo lwesikipa. Impendulo nguewe, umzobi wegraphic yinxalenye ye-50% yoyilo lwengubo ethile.
Kule posi, sizinxibele i-t-shirts yokuyila ukukubonisa ezinye zezona ziyilo ezimele kakhulu kwicandelo lefashoni. Akunjalo kuphela, Siza kungena nzulu kwihlabathi lefashoni kwaye sikubonise abona bayili babalaseleyo emhlabeni.
1 fashion: yintoni
2 Uyilo oluhle lwe-t-shirt
2.1 adidas yam
2.2 isikipa sasekhaya
2.3 Isikipa sikaHermes
2.4 i-dior t-shirt
2.5 Iivans Custom
3 Ezinye zezona mpawu zefashoni
ifashoni ichazwa njengelinye lawona mashishini amelweyo kwihlabathi. Injongo yalo kukuyila, ukuyila okanye ukuyila isiqwenga esithile sempahla. Kodwa ayisiyiyo nayiphi na idizayini, kuba xa iyilwe, yonke inkcubeko, amaxabiso kunye nobuntu bomyili kunye nophawu luyasetyenziswa.
Kubaluleke kakhulu ukugxininisa iinjongo zangaphambili ukuba wonke umyili kufuneka azigcine engqondweni. Xa uyila, ukwambathisa umntu ngeengcinga zakho kunye nemilinganiselo yakho. Ngenxa yesi sizathu, imboni yefashoni iye yamkelwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje, ibe lelinye lawona macandelo axatyiswa kakhulu kwimarike.
Imfashini isekelwe kwinto yokuba kukhetho lweqela, oko kukuthi, alusebenzi nje kuphela kunye nomyili, kodwa bobabini abaqulunqileyo kunye nabo bayenzayo kwaye bayilungiselele bayachaphazeleka. Yiyo loo nto iminyaka, imfashini ibisoloko ingaphezulu kwamanye amashishini, kodwa ihlala isemva. Xa iyilwe, zombini imizobo yayo kunye nesibakala sokuba iyasebenza eluntwini iyathathelwa ingqalelo.
Icandelo leshishini lelona likhawulezayo kwiimarike, kwaye kungekhona ngenxa yokuba iingubo ziyimilingo, kodwa kunoko, okwangoku sineendlela ezininzi zokuthutha kunye nokuthengisa impahla. Ligama okanye uphawu olwathi kwiminyaka eyadlulayo lwalungenakucingelwa kwaphela, ekubeni zazithengiswa kuphela kwiimarike ezincinci emva koko zingafikeleli kubaphulaphuli abaninzi okanye ababanzi.
Ifashoni iye yaguquka, ukuba sithetha ngoyilo sinokuthi Ikwaphenjelelwe naziimeko zezopolitiko okanye zamanani abantu, kubandakanya iimfazwe, iinguqulelo, utshintsho lwentlalo, njl. Ifashoni ibe yimpembelelo kunye nesandulela solu tshintsho. Nto leyo eyenza ukuba ibe lelona shishini lenguqu.
Okwangoku baninzi abayili ababheja kwiibrendi ezinkulu. Iimpawu eziye zavela ngokuhamba kwexesha ukuze zibe yile nto siyibonayo namhlanje.
Ekugqibeleni, kuyafaneleka ukuba uqaphele ixabiso eliphezulu lezoqoqosho eliveliswe kwishishini lefashoni, ixabiso lezoqoqosho elidlula i-100 yezigidi ngonyaka. Kwaye asikuko ukuba uyilo lunento yokwenza nayo, kodwa kunoko ixabiso elinikwe isambatho ngasinye. Isixa semali esiveliswayo asikholeleki.
Uyilo oluhle lwe-t-shirt
Umthombo: The Toaster
Ihempe ye-Adidas RUN yenye yeehempe ezithengiswa kakhulu kulo lonke ishishini lefashoni. Kwaye kuya kubonakala ngathi i-t-shirt elula ekuqaleni, kodwa ukuyila kwayo kushiya umyalezo ofihlakeleyo onomdla. Sikipa esimnyama okanye esimhlophe esinefonti ephantsi kakhulu kwaye wenze amandla angaqhelekanga aqhelekileyo ohlobo lwempahla yezemidlalo.
Ngesi sizathu, ikwagqalwa njengenye yezona zinto zibiza kakhulu kwimarike, ukukhuphisana nezinye iimpawu ezikhuphisanayo ezifana neNike okanye iReebok. Ngaphandle kwamathandabuzo i-t-shirt enoyilo lokuqala.
Umthombo: 1001 ijezi
Uyilo lwesikipa saseKhaya esiye sayila indawo yokutyela apho uJohn Lennon wayedla ngokuya khona, liguqule ilizwe lefashoni ngoyilo lwayo. Kwaye kungekhona ngenxa yoyilo lwayo, kodwa nangenxa yexabiso layo. Umfanekiso wemvumi wamthatha iminyaka kwiikonsathi kwaye waba ngumqondiso. Kangangokuba, xa waswelekayo, abalandeli bakhe abaninzi babefuna ukuyifumana, kuba yayibaluleke kakhulu.
Yihempe emnyama enelogo yaseKhaya kwindawo esembindini yehempe emhlophe.
UHermés luphawu lwempahla eyaziwayo kwicandelo lefashoni. Ayiphelelanga nje ekubeni ibe luphawu olubalaseleyo nolubalulekileyo kuyilo lwalo, kodwa nakwimpembelelo yokuba uyilo kwenye yeengubo zalo, ingakumbi i-t-shirt.
Wasebenzisa ulusu lwengwenya ukwenza ihempengokoqobo ihempe yonke yenziwe ngesikhumba sengwenya, into eyabamba ingqalelo yababukeli kunye nabayili kwishishini. Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo olunomtsalane kakhulu kwaye luxabiseke kakhulu.
I-Dior nayo yenye yezona zinto zixatyisiweyo kwiimarike, kangangokuba kwiphulo lasentwasahlobo, ndagqiba ekubeni ndiyile i-t-shirt enomyalezo we-feminist kuyo. Umyalezo ojikeleze ihlabathi njengoko yayisisikhumbuzo esincinci apho umfazi waboniswa njenge-protagonist kwaye yongezwa kubugcisa njengenguquko.
Isiphakamiso esiphumelele kakhulu ngexesha le-catwalk, kunye nesambatho esabamba ingqalelo yabo bonke ababekho. I-t-shirt ayibonakali nje ngomyalezo wayo, kodwa kunye nexabiso layo, kuba libiza kakhulu.
Iivans luphawu oluvelisa kunye noyilo lwempahla yezemidlalo, ephefumlelwe ngokwendawo yimpahla yasedolophini kwaye iyenze isebenze kubatyibilizi. Usebenzisa imibala eqaqambileyo kwizikipa zakhe kwaye ukwayila imizobo ewisa imihlathi. Yenye yeebrendi ezithi, ecaleni kweSanta Cruz okanye iDC, Baye bagcina umgca wezemidlalo iminyaka kwaye baye baphuma ngaphezu kwabanye kwiimarike.
Abazizo iimpawu ezilungileyo kuphela zexabiso kodwa kunye nomgangatho weemveliso zabo, kuba basebenzisa amalaphu akumgangatho ophezulu kwaye oko kubanika ukuqondwa okuphezulu.
Ezinye zezona mpawu zefashoni
Ifemu eyaziwayo nedumileyo yempahla yezemidlalo, iNike, kunyeIthathwa njengophawu lwesibini olubalaseleyo kwihlabathi. Kwaye akufanelekanga ukuba iya kuba luphawu lwezemidlalo, kuba iimveliso zayo zikumgangatho ophezulu kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kuzo. Kuye kwaba lolona phawu lumele kakhulu kuba abadlali abaninzi abadumileyo kunye neemvumi ezivela kwihlabathi jikelele basayine kunye ne-Nike ngexesha elithile kwimisebenzi yabo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Nike yenye yeebrendi ezifikelelekayo kumntu wonke kwaye igqibelele kuyilo lwayo.
I-Gucci yinkampani yempahla enemvelaphi yase-Itali. Idweliswe njengenye yeempawu ezibiza kakhulu kulo lonke ishishini. Kwaye akufanelekanga, ekubeni umyili wayo wakhetha umgca omhle wobunewunewu. Uthathe inxaxheba kwiindlela ezininzi zefashoni eMilan kwaye usebenzisane nabantu abaninzi abadumileyo., abaye baphatha intengiso ye-brand kwaye bayinike ulwaziko olulufaneleyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeebrendi ezifumene impumelelo enkulu kwimarike kwaye, ngaphezu koko, ayibonwa kwezinye zeefestile zayo zeevenkile kwihlabathi jikelele.
IDior yenye yeebrendi ezikhuphisana neGucci ngembasa yokuqatshelwa kolona phawu luphumeleleyo noluxabisekileyo. Ifemu yamaFrentshi ibisoloko igqamile kuyilo lwayo olukhethekileyo nolomntu. Ngokungathandabuzekiyo umfanekiso weemodeli ezininzi kunye nabalingisi abaninzi. Kwakhona enye yeempawu ezizama ukudibanisa nezizukulwana ezitsha, eziququzelela ukukhula kophawu kunye nokubonakaliswa kwayo okuphezulu.
Ukuba ujonge umgangatho kunye nobunewunewu, lolunye lweempawu ezibalaseleyo kula macandelo kunye nelona livelisa kakhulu kulo.
Asikwazanga ukushiya i-brand eyaziwayo kunye ne-Balenciaga eqinile. Yenye yeebrendi ezihamba kunye neGucci, enyanisweni, zihlala zikhuphisana kwiiparade ezifanayo kunye nee-catwalks. Luphawu oluyinyani olunexabiso eliphezulu lezoqoqosho. Nto leyo ethetha ukuba lolunye lweempawu ezikwasebenza namagosa aphezulu kwaye iye yakhuthazwa ngamagcisa abalaseleyo, abayili, abadlali beqonga, iimvumi kunye nabadlali bebhola ekhatywayo.
Yenye yeebrendi ezizama ukufikelela nabaphulaphuli abancinci kodwa ngaphandle kokushenxa kwithowuni yayo esemthethweni. Luphawu lokugqwesa kwimarike ngaphandle kwamathandabuzo.
Ilizwe lefashoni likhulu kangangokuba sidinga iintsuku, iinyanga kunye neminyaka ukuze silifunde ngokucokisekileyo. Kwaye kukuba yonke imihla kukho iibrendi ezininzi ezijoyina ishishini elithatha inxaxheba kuqoqosho kunye nenkcubeko amashumi eminyaka.
Siyathemba ukuba ezinye zoyilo lwe-t-shirt esikubonisileyo ukubamba ingqalelo yakho njengoko sikwenzileyo, siyakumema ukuba uqhubeke nokuphanda ngakumbi malunga necandelo lefashoni kunye nemiba yalo eyahlukeneyo, kwaye uqalise ukuyila uyilo lwakho lokuqala kunye iimpawu zokuqala zempahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo lwe-t-shirt